नेतृत्व ज्यूहरु ! जनतालाई कहिलेसम्म प्रयोग गर्ने ? | एक्सप्रेस | GNN Nepal GNN Nepal नेतृत्व ज्यूहरु ! जनतालाई कहिलेसम्म प्रयोग गर्ने ? | एक्सप्रेस | GNN Nepal
नेतृत्व ज्यूहरु ! जनतालाई कहिलेसम्म प्रयोग गर्ने ?
माघ २८ गते, २०७७ १५:४३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । माघ २३ गते केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले काठमाडौंमा ठूलो जनसभा आयोजना गरेको थियो । ओली समूहले आयोजना गरेको जनसभालाई लिएर प्रचण्ड माधव समूहले पञ्च र्‍यालीको संज्ञा दियो । ओली समूहको कार्यक्रमको अघिल्लो दिन प्रचण्ड नेपाल समूहले देशभर आमहड्ताल गर्‍यो । आमहड्तालका कारण देशभरका सर्वसाधारणहरुले निकै सास्ती खेप्नुपर्‍यो। त्यति मात्रै होइन सो दिन रोजीरोटी गरिखाने मजदुरहरुका ट्याक्सी जलाइए । एकदिनको आमहड्तालका कारण देशको अर्थतन्त्रमा समेत दरार आयो ।
कार्यक्रम थियो माघ २८ गतेको । कार्यक्रम माघ २८ गतेको भएपनि कार्यक्रमको प्रचारप्रसार भने बृहत् रुपमा गरिएको थियो । सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न माध्यमहरु मार्फत दुबै अध्यक्षको ‘माघ २८ गते काठमाडौंमा हुने विरोध सभामा उपस्थित हुन आग्रह’ नामक भिडियो सार्वजनिक गरिएको थियो । बुधबार बिहानै कार्यक्रममा सहभागी हुन उपत्यका बाहिरबाट कलंकी हुँदै बल्खु आउने सवारी साधनको लर्को लागेको थियो । सवारीमा सवार थिए प्रचण्ड नेपाल समूहका कार्यकर्ता । एकाबिहानै काठमाडौं उपत्यकामा प्रवेश गरेका सवारी साधनका कारण पनि उपत्यकाको सडक अस्तव्यस्त थियो । भृकुटीमण्डपमा विरोध सभाका लागि ठूलो मञ्च बनाइएको थियो । मञ्चको तयारीका लागि मंगलबारदेखि नै भव्य तयारी चलिरहेको थियो । रत्नपार्कका सडकमा माइकहरु झुण्ड्याएको थियो । बुधबार करिब मध्यान्ह १२ बजेदेखि सुरु हुने भनिएको कार्यक्रमका लागि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सवारी साधनमा अत्याधिक चाप देखिन्थ्यो । सर्वसाधारणहरु सवारी जामका कारण समस्यामा थिए । समयमै आफ्नो काममा हिँडेका सर्वसाधारणहरु यो कार्यक्रमका कारण बीच बाटोमै अलपत्र परेका थिए ।
१२ बज्नुअघि नै काठमाडौंका विभिन्न ठाउँहरुबाट जुलुसहरु निस्किन थालिसकेका थिए । सडकमा भित्री गल्लीहरुमा निस्किएका जुलुसहरुले झनै सवारी आवतजावतमा समस्या ल्याएको थियो ।
जब कार्यक्रम सुरु भयो..
भृकुटीमण्डपमा बनाइएको मञ्चमा सबैभन्दा पहिले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल प्रवेश गरेका थिए । उनीहरुसँगै अन्य नेता तथा कायैकर्ताहरु मञ्चमा पुगेका थिए । जब उनीहरु मञ्चमा पुगे मञ्च पछाडि बसेका कार्यकर्ताहरुलाई उनीहरुले हात हल्लाए । त्यसपछि मञ्चमा राखिएका कुर्सीमा थचक्क बसे । कार्यक्रमजस्तो सडकमा सोफा राखिएका थिएनन् । सडकमा सोफा राखेर पद र कुर्सीको माग गरिरहेका उनीहरुको चर्को विरोध भएपछि यो सभामा सोफा राखिएन । त्यसपछि उनीहरुलाई स्यानिटाइजर हातमै दिइयो । उनीहरुले स्यानिटाइजर लगाए । मञ्चको सबैभन्दा अघि क्रमश दायाँबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र सुरेन्द्र पाण्डेका लागि कुर्सी छुट्याइएको थियो । उनीहरु क्रमश त्यसरी नै बसे ।
कुर्सीमा बसिसकेपछि आपसमा उनीहरुले कुराकानी सुरु गरे । तर दुबै अध्यक्ष आजपनि त्यति खुसी भने देखिएनन् ।
कार्यक्रममा बोल्ने पालो आयो रामकुमारी झाक्रीको । झाक्री तिनै नेतृ हुन जसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि अनेकन टिकाटिप्पणी गरेको भन्दै पक्राउको लागि आवहान गरिएको छ । तर आजको कार्यक्रममा भने उनी उपस्थित भइन । जब कार्यक्रम सञ्चालक लिलामणि पोखरेलले पोडियममा उनलाई बोलाए । उनी पोडियममा पुगिन । उनले प्रतिगम मुर्दावाद लेखिएको कालो ज्याकेट लगाएकी थिइन । त्यो ज्याकेट फुकालेर फालिन । त्यसपछि उनको मुखमा सेतो मास्क थियो । उनले त्यो मास्क पनि खोलिन । मास्कभित्र दुइओटा कालो टेपले उनले मुख टालेकी थिइन । उनले त्यो मास्क र टेपपनि निकालेर फालिन । त्यसपछि उनले बोल्न थालिन ।
उनले सुरु गरिन बोल्न पाइन्छबाट । उनले भनिन्, ‘हामीले ल्याएको व्यवस्थामा बोल्न पाइन्छ । नागरिकको मुखमा टेप टाँसिएको छैन । सर्वसत्तावादको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ, संविधानको चिरहण गर्नेका विरुद्ध बोल्न पाइन्छ । संविधान र कानुनी राज्यको खिलाफमा सेटिङ र बन्द कोठाभित्र भएका अध्यारा षड्यन्त्रका विरुद्ध बोल्न पाइन्छ ।’
अमेरिका र चीनबीचको बैठकमै विवाद, आफ्नो बदनाम गर्ने कार्य बन्द गर्न अमेरिकालाई आग्रह
साउन ११ गते, २०७८
पूर्वी अफगानिस्तानमा सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी नौको मृत्यु
कालिकोट पहिरो अपडेट : १० को मृत्यु, दुई जना अझै बेपत्ता